ကတ်ကြေးသံမဏိပစ္စည်းများလမ်းညွှန် - ထိပ်ဆုံးသတ္တု ၁၄ လုံး - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ကတ်ကြေးသံမဏိပစ္စည်းများလမ်းညွှန် - ထိပ်ဆုံးသတ္တု ၁၄ လုံး
ဇွန်အိုး စက်တင်ဘာလ 24, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 12
သင့်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါရစေ။ "အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်ကဘာလဲ။ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံတန်ဘိုးရှိတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ"
ဤသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ ဒေါ်လာ ၉၉ ကိုမဟုတ်ဘဲတစ်စုံအတွက်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကိုအဘယ်ကြောင့်ပေးမည်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆံပင်ညှပ်နေလျှင်အချိန်ကြာရှည်စွာအသုံးချနိုင်သောမှန်ကန်သောကိရိယာများထားရန်အရေးကြီးပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
ကတ်ကြေးသံမဏိအရည်အသွေးကို Rockwell Hardness Rating (HRC / HR) မှသတ်မှတ်သည်။ Rockwell HRC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲ။
သံမဏိအမျိုးအစားတိုင်းသည်သံမဏိဖြစ်သည်။ Rockwell Hardness Scale ဖြင့်တိုင်းတာလျှင်သံမဏိအဆင့်HRC).
အရည်အသွေးမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး။ အသုံးများသောပရီမီယံကတ်ကြေးများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ကြမ်းတမ်းပြီးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောဓါးအစွန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးထက်မြက်စေသည်။
Ultra အရည်အသွေးမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး။ သာအကောင်းဆုံးကတ်ကြေးများတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
HRC ပိုမိုမြင့်မားလေလေ၊ ပစ္စည်းပိုမိုခက်ခဲလေလေဓါးသည်ပိုမိုပြတ်သားလေလေယင်းတို့သည်ချေးခြင်း၊ သံချေးခြင်းစသည်တို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အရည်အသွေးနိမ့်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ကတ်ကြေးများကိုရွေးချယ်ရာတွင် HRC တစ်ခုတည်းသောစဉ်းစားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများကသင်၏ကတ်ကြေးများမည်မျှထက်မြက်မည်၊
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး၏အဓိကကွာခြားချက်မှာအသုံးပြုသောသတ္တု (သံမဏိ) နှင့်အလုံးစုံလက်မှုပညာဖြစ်သည်။
ကတ်ကြေးများအတွက်ဂျပန်လူကြိုက်အများဆုံးသံမဏိဖြစ်ကြသည် 440C, VG10 (VG-10), VG1 (VG-1) နှင့်ကိုဘော့ ATS314 (ATS-314) ။
သာ။ ကောင်း၏သတ္တုသာ။ ကောင်း၏ဓါးသွား
၎င်းသည်ဓါးသွားများအားလုံးကိုတိုးတက်စေသည်၊ သို့သော် Premium သံမဏိဖြင့်ဂျပန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အများဆုံးညှပ်များဖြစ်သော Convex edge blades ကိုအသုံးပြုသည်။
ပိုကောင်းသတ္တုသာ။ ကောင်း၏ Ergonomics
အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိသည်အံ့သြဖွယ်ရာအလင်းဖြစ်သည်။ ဤပိုမိုပေါ့ပါးသည့်သံမဏိသည်ဖြတ်တောက်စဉ်သင်၏လက်ချောင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ တံတောင်ဆစ်နှင့်ပခုံးတို့ကိုဖိအားပေးသည်။
ဂျပန်သံမဏိညှစ်စက်များသည်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားလျှင် ၅ နှစ်မှဆယ်နှစ်အကြားကြာရှည်နိုင်သည်။
အဆိုးဆုံးသံမဏိကိုအိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်နှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင်ပြုလုပ်သည်။ ဤအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကတ်ကြေးများသည်အတုံးများအနားမရှိဘဲသူတို့မကျရောက်မီတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သာထက်မြက်စေနိုင်သည်။
ထိပ်တန်းအကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်သံမဏိ ၁၀ ခု
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုတွင်အဆိုးရွားဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအမျိုးအစားသံမဏိဖြစ်သည်။
သံမဏိအဆင့် အမည် ဖော်ပြချက်
နံပါတ် ၁ အကောင်းဆုံးသံမဏိ ATS-314 (ATS314) စင်ကြယ်သောဂျပန်သံမဏိ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိနှင့်အတူ ကိုဘော့၊ တိုက်တေနီယမ်နှင့်ဗန်နာဒီယမ်
#2 VG-10 (VG10) ရွှေ အလွန်မြင့်မားသောတိုက်တေနီယမ်နှင့်ဗန်နာဒီယမ်ပါဝင်သောအရည်အသွေးမြင့်ဂျပန်သံမဏိများကိုအကောင်းဆုံးကတ်ကြေးများနှင့်ဓားများအတွက်ပြုလုပ်သည်။
#3 V-10 (V10) မြင့်မားသောတိုက်တေနီယမ်နှင့်ဗန်နာဒီယမ်သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဓါးသွားပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
#4 V-1 (V1) ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးသွားများအတွက်အဆင့်အဆင့်တိုက်တေနီယမ်နှင့်ဗန်နာဒီယမ်သံမဏိပြားများ။
#5 S-3 (S3) ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်နိုင်သောအနားများအတွက်ကိုဘော့အမြင့်
#6 S-1 (S1) မာကြော။ ဖြတ်တောက်နိုင်သောညှပ်များအတွက်အဆင့်အဆင့်ကိုဘော့သံမဏိ။
#7 440C ပရီမီယံဆံပင်ကတ်ကြေးအတွက်ရေပန်းစားသောမာကြောသောဂျပန်သံမဏိ
#8 440A အခြေခံအကျဆုံးဓါးသွားများတွင်အသုံးပြုသောသံမဏိအမျိုးအစား။
#9 420 စျေးပေါသောသံမဏိများကိုအခြေခံအားဖြင့်ကတ်ကြေးများနှင့်ဓားများပေါ်တွင်အသုံးပြုသည်။
#10 410 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးများအတွက်မထောက်ခံသည့်ဈေးအပေါဆုံးအသုံးပြုသောသံမဏိ
ကိုဘော့သံမဏိကို အသုံးပြု၍ သင်၏ဓါးများကိုပိုမိုပေါ့ပါးစေရန်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းစေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ကိုဘော့သံမဏိသည်သင်၏ Shears အားထက်မြက်သောဖြတ်တောက်မှုကိုပေးပြီးကြာရှည်စွာခံနိုင်သဖြင့်သင်သည်သင်၏ကတ်ကြေးများကိုမကြာခဏထက်မြက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ထိပ်တန်း 14 အကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်သံမဏိများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေး၊ အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးနှင့်ဈေးကွက်တွင်ကောင်းမွန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးသံမဏိများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောဖြတ်တောက်ခြင်းသံမဏိသည်အမြဲတမ်းရှိတတ်သော်လည်းလူတိုင်းတွင်ဘတ်ဂျက်ရှိကြသည်။
အဆိုပါ V1 သံမဏိ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသောအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသံမဏိတစ်ခုဖြစ်သည်။ V1 သည် VG10 သံမဏိထုတ်လုပ်မှုတွင်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကတ်ကြေးများပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ခိုင်မာခြင်းနှင့်အက်ကွဲခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဂျပန်၏ကျော်ကြားသော Hitachi Metals ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်သည်, ATS-314 သည်အဆင့်မြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးများနှင့်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖြစ်သည်။ ကတ်ကြေးတံဆိပ်တွေအများကြီးက ATS-314, ဒါမှမဟုတ် ATS314, သံမဏိသုံးခြင်းအကြောင်းပြောဆိုပေမယ့်အနည်းငယ်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Hitachi မှပြုလုပ်သောတရားဝင်သတ္တုကိုသုံးသည်။
ATS-314 သံမဏိသည်အလွန်မာကျောသောအဆင့်မြင့်သောကတ်ကြေးတံပြားကိုဖန်တီးသည်။ ၎င်းသည်ဓါးသွားကိုပိုမိုကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်ပြီးချွန်ထက်သောခုံးအစွန်းသို့မဟုတ် Clam ပုံစံဓါးအစွန်းကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။
VG10 (VG-10) ကို V Gold 10 ဟုလူသိများသောသံမဏိသည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည် Takefu ဂျပန်ရှိသံမဏိ နှင့်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအချို့များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့လူသိများသည်။ ၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကိုအသုံးပြုသည်။ ဖြတ်ချေးခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကတ်ကြေးများအတွက်အခိုင်မာဆုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
သင်၏ VG10 ကတ်ကြေးများသည်ခွန်အားမြင့်မားသည့်ချွန်ထက်သောဓါးများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
VG10 သည်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကတ်ကြေးထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်ဂျပန်သတ္တုကုမ္ပဏီများကနိုင်ငံတကာသို့တင်ပို့သောကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်သာကန့်သတ်မထားပါ။
အကယ်၍ သင်သည် 440CR ထက် 8C သို့မဟုတ် 13Cr10MoV သံမဏိမှအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုရှာနေလျှင်၊10Cr15CoMoV", သံမဏိပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပရီမီယံအဆင့်ကတ်ကြေးကိုဖန်တီးပေးတယ်။
Hitachi / Takefu's VG10 နှင့်ဆင်တူသည် 10CR သံမဏိသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ခိုင်ခံ့မှု၊ ဓါးသွားအစွန်းကြည်လင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်း၊ ချေးခြင်းနှင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်စျေးနှုန်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောမှန်ဘီလူးများအားလုံးကိုဤကတ်ကြေးသတ္တုသည်အမှန်ခြစ်ပေးသည်။
တစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကျော်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးများအတွက်အားလုံးအတွက်အထူးသံမဏိဖြစ်သည်။
440C သည်လူကြိုက်များသောနာမည်ကြီးတံဆိပ်များတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောသံမဏိများဖြစ်သည် Yasaka။ ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ရန်ကတ်ကြေးတံဆိပ်ခတ်ရာတွင်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မာကျောခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျကျအသုံးပြုခြင်းတို့တွင်လုံး ၀ န်းသည်။
သတင်းကောင်းကဂျပန် 440C ဓါးသွားများအတွက်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ပေးဆပ်ရန်မမျှော်လင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကိုချွန်သောဆံပင်ညှပ်ကတ်ပြားများဖြစ်သည်။
8CR, မဟုတ်ရင် 8Cr14MoV or 8Cr13MoV, အရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးနှင့်ဆံညှပ်များတွင်အသုံးပြုသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသံမဏိသည်။ Hitachi ၏ 440C သံမဏိနှင့်ဆင်တူသည်ကတ်ကြေးတစ်စုံကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။
ဆံပင်ကတ်ကြေးများကိုကြာရှည်စွာခံနိုင်အောင်အကောင်းဆုံးသောဓါးသွားအစွန်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ချေးခြင်းနှင့်ကြာရှည်ခံမှုများအတွက် wear ခံနိုင်ရည်။
ပိုကြီးပြီးပိုမိုခိုင်မာသည့် 4CR သံမဏိဖြစ်သော 7CR, မဟုတ်ရင် 7Cr17MoV ဟုလူသိများသည်။ ကောင်းသောဓါးသွားအစွန်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်ချေးခြင်းနှင့် ၀ တ်ဆင်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဒီဟာကဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း (သို့) ဆံပင်ညှပ်ညှပ်အတွက်လုံလောက်ပါသလား။ ဤရွေ့ကားပရော်ဖက်ရှင်နယ်, အလုပ်သင်နှင့်အိမ်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်နိူးများအတွက်ဖျော်ဖြေကြောင်းအလယ်အလတ်အကွာအဝေးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများအတွက်perfectlyုံအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
420 ကတ်ကြေးသံမဏိသည်ဂျပန် 440C ထက်အနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းပြီး၊ ဂျပန်မှဆံပင်ကတ်ကြေးအနိမ့်ပိုင်းတွင်လုပ်ဆောင်သည်။ သင်စျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ပညာရှင်များအတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
8. သံမဏိသံမဏိ: 55-58HRC
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသောသံမဏိအားလုံးသည်အသုံးပြုသည် သံမဏိ။ အခြားအမည်ရှိသံမဏိများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသံမဏိသည်ယေဘူယျအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီးသင်ဝယ်ယူနေသောကတ်ကြေးသို့မဟုတ်ညှပ်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုများစွာသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိပါ။
သြစတြေးလျရှိအမှတ်တံဆိပ်မျိုးစုံမှသုတေသနပြုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သံမဏိထုတ်ကုန်များသည်များသောအားဖြင့် ၅၅ မှ ၅၈ အတွင်း HRC ဖြစ်သည်။ သံမဏိကတ်ကြေးများသည်ဆံပင်ကိုညှပ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည် ပို၍ ချိုသာသောဒေါ်လာ (၉၉-၂၀၀ ဒေါ်လာ) တွင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
ထံမှတစ် ဦး ကရှားပါးခြင်းနှင့်ထူးခြားသောသံမဏိ Yasuki ငွေရောင် ဂျပန်မှာ။ S3 သည်ဓါးသွားများဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအများအားဖြင့်စားဖိုမှူးနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးဓားများတွင်တွေ့ရပြီးဂျပန်မှဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးနှင့်အနည်းငယ်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ဓါတုပစ္စည်းများတွင်လည်းတွေ့ရသည်။
S3 သံမဏိမှအဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်နိုင်သနည်း ပရီမီယံမာကျောမှု၊ ချေးခံနိုင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ပြုလုပ်သောခြုံငုံ။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဆံပင်ကတ်ကြေးများ။
10. ၄၁၀: ၅၆HRC
၄၁၀ သည်ရိုးရှင်းသောခရိုမီယမ်သံမဏိကိုယ်ထည်ဖြစ်သောကြောင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သော wear၊ corrosion နှင့်ပျက်စီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အများအားဖြင့်ဂျပန်မှဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများတွင်တွေ့ရသည်။
11. ခရိုမီယမ်သံမဏိ: 53-56HRC
ခရိုမီယမ်သံမဏိ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားခွဲများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဂျာမနီသို့မဟုတ်ဥရောပကနေကတ်ကြေးများတွင်အသုံးပြုကြောင်းနိမ့်မှအလယ်အလတ်အကွာအဝေးသံမဏိသည်။ နာမည်ကြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ Jaguar သူတို့ရဲ့မူလအဆင့်ဆံပင်ကတ်ကြေးတွေလုပ်တဲ့အခါခရိုမီယမ်သံမဏိကိုအသုံးပြုပါ။
ဘတ်ဂျက်အတွက်ကတ်ကြေးအတွက်အဆင်ပြေပါက၎င်းသည်တတ်နိုင်သောကြောင့် bevel အစွန်းဓါးသွားများအတွက်ပြတ်သားမှုအရည်အသွေးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
အဆိုပါ 4Cr14MoV 4Cr13 နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းကိုရရှိနိုင်မှုကြောင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးများတွင်ပိုမိုတွေ့ရှိရသည်။ အလယ်အလတ်တန်းဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများတွင်တွေ့ရှိရသည်။
အဆိုပါ 3Cr13 လူကြိုက်များနှင့်ဆင်တူအရည်အသွေးတွေရှိကြောင်းတရုတ်ထံမှရိုးရှင်းသောသံမဏိဖြစ်ပါတယ် 420J2 (AUS 4)။ ရိုးရှင်းသောဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးများတွင်တွေ့ရှိရပြီးပါးလွှာသောညှပ်ညှပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
မဟုတ်ရင်အဖြစ်လူသိများ 4Cr13 40Cr13, 3Cr13 ၏အခိုင်အမာနှင့်ခက်ခဲတဲ့အစ်ကိုတစ် ဦး စံသံမဏိဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအားသည်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူများအတွက်ပိုမိုပြတ်သားသောခုံးသောအစွန်း (သို့) bevel အစွန်းဓါးသွားများကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
4Cr13 ကတ်ကြေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကတ်ကြေးတစ်စုံကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချသင့်သလား။ သူတို့ကအလယ်အလတ်တန်းဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း (သို့) ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးများကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ကြပြီး 55HRC + မာကြောမှုသည်ဘဏ်ကိုမချိုးဖဲ့ဘဲဖြတ်တောက်နိုင်ရန်လုံလောက်ပါသည်။
ကတ်ကြေးများအတွက်ဂျပန်လူကြိုက်အများဆုံးသံမဏိများမှာ 440C, VG10 (VG-10), VG1 (VG-1) နှင့် Cobalt ATS314 (ATS-314) ။
ပိုကောင်းတဲ့သံမဏိသာ။ ကောင်း၏ Ergonomics
အကြောင်းပိုမို Read အရည်အသွေးနိမ့်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်သောကတ်ကြေးသံမဏိ ဒီမှာ။
အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်သံမဏိသည်ဂျပန်၊ ဂျာမနီနှင့်တရုတ်မှဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသံမဏိကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ဂျပန်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ကတ်ကြေးတစ်ပတ်ပတ်လည်တွင်နိုင်ငံတကာဖောင်းပွမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ဂျာမနီသည်အရည်အသွေးမြင့်ခရိုမီယမ်သံမဏိကိုထုတ်လုပ်ပြီးကတ်ကြေးတံဆိပ်များကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် Jaguar Solingen သည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကမ္ဘာကိုဖြားယောင်းနိုင်ခြင်း။
တရုတ်သည်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိများကိုထုတ်လုပ်သည်။ လူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ဂျပန်နှင့်ဂျာမနီတို့၏အရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ သူတို့ကအမြင့်မားတဲ့စျေးနှုန်းသက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးသံမဏိများလည်းရှိသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို Read ဒီမှာဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသတ္တု။
အဖြေ: ကတ်ကြေးတံဆိပ်သံမဏိသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိပြီးသင်၏ဘတ်ဂျက်အပေါ်မူတည်သည်။ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးသည် V1, VG10 သို့မဟုတ် ATS314 ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်တစ်စုံလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကုန်ကျနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအတွက်၊ သင်မာတောင့်မာမှု ၅၈HRC နှင့်အထက်အားလုံးအတွက်အတွဲများကိုသာအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
အဖြေ: တိုက်တေနီယမ်သံမဏိ ကတ်ကြေးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အရောင်ခြယ်ခြင်း (သို့) သံမဏိပြုလုပ်ရာတွင်ပါဝင်သောအရာငယ်များဖြစ်သဖြင့်အနည်းငယ်မှားယွင်းစေသည်။ ကတ်ကြေးသံမဏိတောင့်တင်းမှုကိုသတ်မှတ်ပေးသော HRC ကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ ထို့နောက်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောဆံပင်ညှပ်စက်ကိုရှာနိုင်သည်။
အဖြေ: 440C သံမဏိသည်ဘတ်ဂျက်တွင်အကောင်းဆုံးဂျပန်သံမဏိဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် 56HRC ပါ ၀ င်တဲ့အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကတ်ကြေးကစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ဆံပင်ကိုညှပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိလိမ့်မယ်။
အဖြေ: ၎င်းအတွဲ၏စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကတ်ကြေးများအကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာသံမဏိဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိများသည်ပိုမိုကုန်ကျသော်လည်းသင်၏ဆံပင်ဖြတ်ခြင်းကတ်ကြေးများကိုပိုမိုကြာရှည်စေသည်။
မေးခွန်းဖြေ - တရုတ် (သို့) ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကနေအတုဒါမှမဟုတ်အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့သံမဏိတွေကိုငါဘယ်လိုရှောင်နိုင်မလဲ။
အဖြေ: ပါကစ္စတန်မှာအရည်အသွေးနိမ့်ဆုံးသံမဏိတွေရှိတယ်၊ အဲဒီကတ်ကြေးတွေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ တရုတ်သံမဏိသည်အရည်အသွေးနိမ့်သည့်အမျိုးအစားများကဲ့သို့ပရီမီယံအမျိုးအစားများကဲ့သို့များပြားစွာရှိသည်။ Amazon, eBay နှင့် Wish တို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့်အာမခံခြင်းနှင့်အာမခံခြင်းလဲလှယ်သည့်နာမည်ကြီးဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအာရုံစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကတ်ကြေးအသစ်ကိုစမ်းသပ်ရန်ခွင့်ပြုပြီး၎င်းသည်ကတ်ကြေးများ၏အရည်အသွေးကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအမျိုးအစားသံမဏိဆိုတာဘာလဲ။ ဆံပင်ကတ်ကြေးများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးသတ္တုမှာ 440C သံမဏိဖြစ်သည်။
ဘယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအမျိုးအစားသံမဏိများသည်ပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။ 440C ဂျပန်သံမဏိရှိဆံသားကတ်ကြေးများအတွက်အကြံပြုထားသောသတ္တုသည်
ကျောင်းသားသို့မဟုတ်အလုပ်သင်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်မည်သည့်သတ္တုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။ 440A သံမဏိသည်မူလအဆင့်ဆံပင်ကတ်ကြေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သန့်စင်သော 100% တိုက်တေနီယမ်ကတ်ကြေးများရှိပါသလား? ၁၀၀% တိုက်တေနီယမ်ကိုကတ်ကြေးများတွင်မသုံးပါ။ သို့သော် Shears သည် ၂% မှ ၁၀% အထိရနိုင်ပါသည်။
သံမဏိဆိုတာဘာလဲ သံမဏိသည်ဓါးသွားအားလုံးအတွက်အသုံးပြုသောသတ္တုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်ဗားရှင်းများပိုမိုခက်ခဲသည်။
ဆံပင်ညှပ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးသတ္တုကဘာလဲ။ ဂျပန်မှ ATS-314 (သို့) VG-10 ပရီမီယံကြေးနန်းသံမဏိ။
ဒမာသက်မြို့ကတ်ကြေးသံမဏိတည်ရှိသလား။ ဒမတ်စကတ်သံမဏိကိုနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်မထုတ်လုပ်နိုင်သေးပါ။ ဆံပင်ညှပ်ရန်အသုံးပြုသော Damascus သံမဏိသည်ဒီဇိုင်းမျှသာဖြစ်သည်။
တိုက်တေနီယမ်ကတ်ကြေးများပိုကောင်းပါသလား ဓါးသွား၏မာကျောမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တိုက်တေနီယမ်ကိုကတ်ကြေးသံမဏိထဲသို့ထည့်သည်။ တိုက်တေနီယမ်ကို Premium shear တွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ တိုက်တေနီယမ်ကတ်ကြေးအချပ်များသည်ပိုမိုပေါ့ပါး။ ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသည်။
6cr သံမဏိကဘာလဲ? မဟုတ်ရင်လူသိများတဲ့ 6CR6CR13MoV "သံမဏိကိုယ်ထည်ကို ၀.၆၆ ကာဗွန်ထပ်ထည့်သည်။
9cr သံမဏိကဘာလဲ? မဟုတ်ရင်လူသိများတဲ့ 9CR9Cr13MoVCo "or" 9Cr18MoV "သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ကြေးအတွက်အသုံးပြုသည့်အရည်အသွေးမြင့်တရုတ်သံမဏိဖြစ်သည်။
Powder Steel သည်ကတ်ကြေးအတွက်အသုံးဝင်ပါသလား။ အမှုန့်သံမဏိသည်ထူးခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အမှုန့်သံမဏိပြားများသည်အရည်အသွေးမြင့်သောချွန်ထက်သောဓါးများ၊ ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းနှင့်သံချေးမတက်စေရန်ကာကွယ်ပေးသည်။ အမှုန့်ကတ်ကြေးသံမဏိသည်ဂျပန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် Hitachi ATS314 နှင့် Takefu VG10 ညှပ်ညှပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအနားများနှင့် Ergonomically ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။
သို့သော်သင် 440C, VG1 / 10, Cobalt နှင့် ATS-314 အဆင့်များသို့ရောက်သောအခါဤကတ်ကြေးများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာခံနိုင်ရည်ရှိမည်ဟုစိတ်ချနိုင်သည်။
ကနေဒါရှိကတ်ကြေးများအတွက်အကောင်းဆုံးသံမဏိ | ဤနေရာတွင်ဂျပန်ကတ်ကြေးအရောင်းဆိုင်တွင်ဖတ်ပါ
ဤဆောင်းပါး၌ဤကတ်ကြေးသံမဏိပစ္စည်းတွင်အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်အချို့ပါ ၀ င်သည်။ ဒါကိုနားလည်လွယ်ပြီးဖတ်ရတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါကကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပါ။
ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးနဲ့ပညာရှင်တွေအတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတဲ့အရည်အသွေးပစ္စည်းတွေပါလဲဆိုတာငါစဖတ်တုန်းကမေးခွန်းအကြီးကြီးပေါ်လာတယ်။ ကတ်ကြေး (သို့) ညှပ်ရန်မည်သည့်သတ္တုအမျိုးအစားကအကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။ ဒီဆောင်းပါးကငါ့မေးခွန်းကိုဖြေတာနဲ့အဲဒါကမင်းကမတူညီတဲ့လူမျိုးတွေဆီကရနိုင်တဲ့သံမဏိရဲ့အရည်အသွေးကိုပိုနားလည်စေတယ်။ တရုတ်ကသံမဏိထုတ်လုပ်တာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုချိန်ထိသူ့မှာအထင်အမြင်မရှိသေးဘူး။